निक जोनससँग विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि प्रियंकालाई भारतीयले हेर्ने नजर फेरीएको हो ? किन बोलाउन थालियो यस्तो नामले ?
काठमाडौं बलिउडमा देशी गर्लको उपनाम पाएकी एक्ट्रेस हुन्, प्रियंका चोपडा । बलिउडमा एकपछि अर्को फिल्म मार्फत दर्शकको मनमा स्थान बनाएकी प्रियंकाले डेब्यु भने ’अन्दाज’ मार्फत गरेकी थिइन् । त्यसयता उनले निर्वाह गर्ने भूमिकाले उनलाई ’देशी गर्ल’को ट्याग दिएको हो ।